ရောင်​နီဦး: အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၃ သန်းတန် ရွက်လှေ
စက်တပ်ရွက်လှေဖြစ်တဲ့အတွက် မြင်းကောင်ရေအား ၅၆၀၀ hp ထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ ဂက်စ်တာဘိုင်အင်ဂျင် သုံးလုံးနဲ့ မောင်းနှင်ပြီး မြင်းကောင်ရေ ၃၇၀ hp အထိ ထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ ဒီဇယ်အင်ဂျင်လည်း ပါဝင်ပါသေးတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ တစ်စီးပဲရှိသေးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဝယ်ယူသူရှိမှ ဖန်တီးပေးတဲ့ ရွက်လှေ အပျော်စီး သင်္ဘောဖြစ်ပါတယ်။
သင်္ဘော ကိုယ်ထည်အစိတ်အပိုင်းအများကို ဖိုက်ဘာသတ္တု၊ ဖိုက်ဘာဖန်သတ္တုတို့နဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ အတွက် အလေးချိန် ၉၅ တန်ပဲရှိပါတယ်။ သဘောင်္ပေါ် လူ ၁၂ ဦးအတွက် နေရာထိုင်ခင်း အပြည့်အစုံ ပါဝင်ပါတယ်။ ချက်ပြုတ်ခန်း၊ စားသောက်ခန်း၊ ရွက်လှေထိန်းချုပ်ခန်း၊ စက်ခန်း၊ ဧည့်ခန်းအစရှိသဖြင့် ကျကျနန ခွဲခြားထား ပေးပါတယ်။ ၁၁၈ ပေရှည်တဲ့ ရွက်လှေအတွင်းမှာ ခေတ်မှီစက်ကိရိယာ အပြည့်အစုံ တပ်ဆင် ပေးထားပါတယ်။ Plasma တီဗီ ၆ လုံတပ်ဆင်ထားပါတယ်။ စာသောက်ခန်းအနေနဲ့ သင်္ဘောရဲ့အမြင့်ဆုံး အပိုင်းမှာ ထားရှိပြီး ဘေးဘယ်ညာ ၃၆၀ ဒီဂရီ ကြည့်ရှုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သင်္ဘောဝမ်းဗိုက်ကို ဖိုက်ဘာဖန်သားနဲ့ ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ အကြမ်းခံပြီး ပေါ့ပါးရန်ရည်ရွယ်ထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အမြန်ဆုံး တစ်နာရီ မိုင် ၇၀ မောင်းနှင်နိုင်ပြီး ဆီစားနှုန်းကတော့ တစ်နာရီ ဂါလံ ၉၀၀ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆီသိုလှောင်နိုင်အားကတော့ လီတာ ၂၂၀၀၀ ရှိပါတယ်။
ဂက်စ်တာဘိုင်မတပ်ပဲ ဒီဇင်အင်ဂျင်နှစ်လုံးတပ်မယ်ဆိုရင် သင်္ဘောရဲ့ ဈေးနှုန်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၂ သန်းသာ ကုန်ကျမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူဌေးများအတွက် ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ယင်း ရွက်လှေကို 118 WallyPower လို့အမည်ပေးထားပါတယ်။
Photo courtesy of englishrusia.com. All Rights Reserved.
Posted by YaungNiOo at 7:35 PM